आयो खुसीको खबर, पल साह ८ गते छुट्छन् त? यस्तो छ रोचक कुराकानी,हेर्नुहोस भिडियो – Annapurna Post News
April 21, 2022 April 21, 2022 sujaLeaveaComment on आयो खुसीको खबर, पल साह ८ गते छुट्छन् त? यस्तो छ रोचक कुराकानी,हेर्नुहोस भिडियो
पल साह प्रकरण,पीडितका बुबाले बयान फरेका छन् उनले अभिनेता पल शाहविरुद्ध जब “” रजस्ती क””रणीको मुद्दामा नाबा”लिकाको बुवालेसमेत अदा””लतमा बयान फेरेका छन्।
तनहुँ अदालतमा बकपत्र दिने क्रममा उनले छोरीको कुरालाई आधार मानी जाहेरी दिएको बताए रहदा जिल्ला अदालत तनहुँका मिनबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका हुन्।
पहिला जाहेरीमा जे उल्लेख थियो विपरीत बयान दिनुभयो भन्दै कुँवरले भने उहाँले जा हेरीमा गरेको हस्ताक्षर आफ्नै भएको स्वीकार गरेका छन्।
यो पनि पढनुहोस्‌:यिनै हुन् आफ्नै पेटमा गो’ली हा नेर ज्यान गुमाएकी सैनिक जवान कोपिला-आफैँलाई गो’ली हानेकी कपिलवस्तुस्थित शमशेरदल गणमा कार्यरत सिपाही कोपिला राजवंशीको मृ’त्यु भएको छ। कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी जेसी शाहका अनुसार भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा बिहान उनको मृ’त्यु भएको हो।
उनको पेटमा दुई वटा गो’ली ला’गेको बताइएको छ । राजवंशी आफैंले गोली चलाएर देह त्याग ग रे को प्रहरीले जनाएको छ । डिएसपी शाहका अनुसार सिपाही राजवंशीले ड्युटीमा रहेका बेला आफैँले बोकेको एम १६ राइफलले आफ्नै पेटमा गो’ली हा’नेकी थिइन् । तर सैनिक स्रोतले घटनाबारे केही खुलाएको छैन । source- sunaulokhabar
ओलीलाई श्रीमतीले बिहान ४ बजे आएर थर्काएपछि…